Branding YeEcommerce - Kudonhedza kubva pasirese kusvika pasirese
Kutanga kuratidzwa kunogona kuita kana kuputsa kutengesa. Uye sewe muzvinabhizimusi iwe unoda kuve nechokwadi chekuti urikupa bhizinesi rako zvakakwana. Kugadzira chitoro chako kunoenderera kupfuura logo yakapusa, asi zvakare inofunga hunyanzvi hwehungwaru hunoratidzwa nebhizinesi rako. Pane akatiwandei maitiro aunofanirwa kuziva paunenge uchiratidzira bhizinesi rako. Muchinyorwa chino tinotarisira kuburitsa mwenje pamatanho akakosha aunofanirwa kutora kana uchimaka ecommerce.
Niche: Nyaya yekufarira yemusika wakapihwa inogona kunzi Niche. Kune mazana emisika dzakasiyana yekupinda mairi, imwe neimwe iine huwandu hwayo hwevatengi. Kuziva izvo zvigadzirwa zvaunoda kutengesa kana izvo vatengi iwe zvaunoda kusvika zvinozotarisa iyo Niche chitoro chako nekuwira mukati.
Core Vateereri: Ndivanaani vatengi vako? Zera ripi uye murume kana murume ndewevanhu. Kuva nechiono chakajeka chekuti ndiani wepamoyo vateereri vako zvichaita kuti zvive nyore kugadzirisa rako rekisheni kutenderera. Ivo vanofanirwa kunzwa sekunge chitoro chako chakagadzirwa chaizvo kwavari, nekuti chinofanira kuve.
Chido Chemuchinjikwa: Ndezvipi zvimwe zvinhu izvo vateereri vako vepamoyo vanofarira. Uye ungazviisa sei izvo mune yako brand aesthetically.
Uchishandisa maturusi akaita seGoogle Maitiro uye Facebook Vateereri Insight inokupa iwe nzira yekupindura iyi mibvunzo. Ita yako tsvagiridzo uye edza kufunga kuti ndiani wepamoyo vateereri vako pamberi pegadziriro yekumaka. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kunongedza musika wakanangana sezvo iwe uri kushambadzira yako brand kuti ikwane iyo kufarira.
Mushure mekunge maita huwandu hwakawanda hwekutsvaga iwe unogona ikozvino kuvaka chitoro kuti chikwanise vateereri vako vepamoyo. Iko panguva ino apo iwe yaunoda kufunga nezve zita, logo, sirogani, ruvara pallet uye matauriro ezwi kuchitoro chako. Kuve nezvose izvi zvinhu zvinopa pfungwa yekufanana kune yako ecommerce saiti uye kushambadzira.
Chitoro Zita: Zita rako rechitoro rinofanirwa kunge iine hukama neNiche mune imwe nzira. Iwe zvakare uchave uchishandisa izvi seDomain Domain yako / URL. Edza kutora chimwe chinhu chisingakanganwike sezvaunoda kuti chinamatire mumisoro yevanhu uye chidzokororwe zviri nyore kuburikidza neshoko remuromo.
Logo: Ichi ndicho chiratidzo chechiratidzo chako uye chinofanira kuzivikanwa nyore nyore. Kazhinji marogo ari nyore muchimiro uye haana anopfuura anopfuura mana mavara akaiswa mairi.
Chirevo: Iyo inozivikanwawo seye tagline. Uyu mutsara mupfupi unogona kukwidza yako yakazara brand brand. Ipfupi uye inotapira ndiyo yakanakisa nzira.
Ruvara Pallet: Mamwe makambani anotengesa iwo chaiwo mavara echiratidzo chavo, aya ndiwo maratidziro ane simba ruvara kana uchimisikidza kuzivikanwa. Starbucks ine imwe mimvuri yegirini iyo yavanoshandisa pane zvavo zvese zvigadzirwa uye yunifomu. Ita imwe tsvakiridzo pamusoro peruvara dzidziso ine chekuita nekutengesa uye edza kutsvaga mashanu mashanu mavara anoshanda mushe nemumwe.
Toni Yezwi: Kana mutengi achiverenga kushambadza kwako uye tsananguro yechigadzirwa, nderipi inzwi reizwi rinonzwika mupfungwa dzavo. Kutengesa kwemotokari kune toni yakasiyana pane kushambadzira kweDisneyland. Uye zviri kwauri kuti uone kuti ndeipi toni iyo yako mutengi inogona kuvimba zvakanyanya.
Tinovimba ruzivo urwu rwakabatsira uye runokupa imwe pfungwa yekuti ungaita sei kwauri kunotevera chiitiko chikuru. Izvo zvakakosha kuti utarise kuti ndeupi mufananidzo wauri kuratidza kune vako vanogona vatengi. Uye kugadzira zita rako nemutengi mupfungwa zvichavandudza yako yekuchengetedza mitengo pamusoro pematemu akareba. Kukupa iwe iri nani mukana wekusvika poindi yekusimudzira.
Tags kudonhedza brand, branding ecommerce, kuvaka chiratidzo, mavakirwo echiratidzo, kutanga sei kudonhedza bhizinesi
← Sei Kumutengo Wako Zvigadzirwa zveYako Dropshipping Chitoro? → Wepamusoro 10 Dhinda pane Zvinodikanwa Zvigadzirwa muna 2020